क्या दामी काठमाडौं ! – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
क्या दामी काठमाडौं !
By डिजिटल खबर Last updated Oct 28, 2019 19 0
ए है के को झिलिमिली ?
बत्तीको झिलिमिली ।’
देउसी भाकामा भट्याइए जस्तै थरीथरीका बत्तीको उज्यालोले धपक्कै बलेको छ, काठमाडौं शहर । औंशीको यो कालो रातलाई चिर्दै धर्ती जगमगाएको छ । यस्तो लाग्छ, आकाशमा चम्किने तारा पूञ्ज धर्तीमा झरेको हो । शहरका चोक, गल्ली जताततै बिजुली बत्तीले रहरलाग्दो बनेको छ ।
आवसिय भवनदेखि ठूला व्यापारिक भवन, सपिङ सेन्टर, मल बिजुली बत्तीले रहरलाग्दो बनेको छ । अक्सर राती ११ बजेपछि सुस्ताउने काठमाडौं शहर यतिबेला भने जाग्रम बसेको छ । जताततै उज्यालो, जताततै चहलपल छ ।
हरेकजसो भान्साबाट फैलिएको सेलरोटीको सुगन्ध, हरेकजसो आँगनमा गुञ्जिरहेको देउसी-भैलो, हरेकजसो घर-दैलोमा सजिएको सायपत्री फूलको मालासँगै रंगबिरंगी बत्तीले शहर रंगीन बनेको छ ।
तिहार भन्नु नै उज्यालो पर्व । झिलिमिली पर्व । यतिबेला सबैले आफ्नो घर-बगैंचालाई थरीथरीका बिजुली-बत्तीले सजाएका छन् । धार्मिक मान्यता के छ भने, घरलाई झिलिमिली बनाएपछि लक्ष्मीले बास गर्छिन् । धनकी देवी लक्ष्मीलाई भित्र्याउने धार्मिक विश्वाससँगै घर सफा-सुग्घर गर्ने, फूलमालाले सजाउने र बिजुली बत्तीले धपक्कै बाल्ने गरिन्छ ।
दियो-पाला बालेर लक्ष्मीको पूजा गरेपछि देउसी-भैलोलाई आमन्त्रण गरिन्छ । तर, अहिले उज्यालोको लागि दियो पाला मात्र बाल्ने गरिदैन । विद्युतिय बत्तीको व्यापक प्रयोग गरिन्छ । तिहारलाई लक्षित गरेर बजारमा थरीथरीका विद्युतिय बत्ती उपलब्ध हुनेगर्छ । विभिन्न आकर-प्रकार, साजसज्जा र रंगहरुमा उपलब्ध ति बिजुली-बत्ती लस्करै सजाएर बाल्ने प्रचलन झांगिएको छ ।
केही बर्षअघिसम्म यस्तो उज्यालोको कल्पना गर्न संभव थिएन । लोडसेडिङको मार खेपिरहेको मुलुक रात परेसँगै अध्याँरोमा हराउने गथ्र्यों । तिहार जस्तो पर्वमा अत्याधिक विद्युत खपत हुने भएकाले विद्युत आपूर्ति सहज हुँदैनथ्यो । पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत आपूर्ति सहज बनाएको छ । तिहार जस्तो पर्वमा समेत पुग्दो विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ । त्यसैले त तिहारमा उपभोत्ताले मन खोलेर घरलाई झिलिमिली बनाएका छन् ।
तिहार खासमा उज्यालकै पर्व हो । गर्मी यामको समाप्ति र जाडो यामको सुरुवातमा आउने यो पर्वले केही सांकेतिक अर्थ पनि बोकेको छ । जाडो याममा धर्ती रुखो हुन्छ । कठ्यागि्रने चिसो बढ्छ । रुख-पात नाङ्गो बन्छ । हरियाली हराउँछ । प्रकृति उजाड हुन्छ । दिन छोटो र रात लामो हुन्छ । यो मौसमी परिवर्तनले हाम्रो मानसिकतामा पनि असर गर्छ । चिकित्सकहरुले भन्ने गरेका छन्, जाडो याममा चिन्ता, तनाव वा डिप्रेसन जस्तो मानसिक समस्या बढ्ने गर्छ । यो भनेको प्रतिकुल मौसमको कारणले हो ।
अतः प्रतिकुल मौसमसँग जुध्नका लागि मनको ज्योति बाल्नुपर्छ । मनलाई उज्यालो बनाउनुपर्छ । अँध्यारो रातलाई उज्यालोले चिर्न सक्छ भन्ने सांकेतिक सन्देशको रुपमा पनि तिहारको उज्यालोलाई लिने गरिन्छ ।
DeepawaliDigital KhabarKathmanduKathmandu CityTihar
अठारौँ ‘नाम’ सम्मेलनः एकतीस उद्देश्य प्राप्त गर्न संयुक्त प्रयास गर्ने बाकु घोषणापत्र जारी
काठमाडौं महानगरपालिकाले कोरोना जोखिमको कारण अझै विद्यालय सञ्चालन नगर्ने
आफ्नै छोरीलाई जबरजस्ती करणी गर्ने बाबु पक्राउ
१२ मंसिर २०७७, शुक्रबार १५:५७